युटुबमा ब’ङ्गारा झा’र्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिने हरि उदासी प क्राउ ! – List Khabar
Home / समाचार / युटुबमा ब’ङ्गारा झा’र्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिने हरि उदासी प क्राउ !
युटुबमा ब’ङ्गारा झा’र्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिने हरि उदासी प क्राउ !
admin August 19, 2021 समाचार Leaveacomment 69 Views
विभिन्न युट्युब च्यानलहरुमा क’डा अभिव्यक्ति दिदै आएका हरि उदासीको श्रीमती बताउने एक महिला आफु पि’डामा परेको भन्दै मिडियामा आएकी थिइन् । आफुलाई चलचित्रकर्मी र सामाजिक अभियान्ताको रुपमा चि’नाउदै आएका उदासीको श्रीमती बताउने ति महिला आफ्नो श्रीमानले धो’का दिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
Previous नयाँ दल दर्ता गरेको केहि घन्टामै माधवलाई ठुलो झड्का, निकालियो बिज्ञप्ति
Next महाजिद्दी हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, जसको संगत गर्नेले पनि पाउँछन् दुख